नमस्कार गर्नुका थप आठ आशय : – Chitwan Post
नमस्कार गर्नुका थप आठ आशय :
यसअघि ‘नमस्कारका सात सन्दर्भ’ भन्ने शीर्षकमा हामीले नमस्कारको विज्ञान, मूल्य वा भनौँ रहस्यका बारेमा चर्चा गर्दै सात सन्दर्भबारे थाहा पाएका थियौँ । यसपटक पनि यो क्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ । यसअघिका सात सन्दर्भ थिए : १. अर्काको अस्तित्वको स्वीकार, स्वागत र सम्मान, २. अरुसितको आध्यात्मिक र आत्मिक सम्बन्धको प्रयास, ३. अध्यात्मको यात्रा, ४. सकारात्मक ऊर्जाको प्रवाह र प्रसारण, ५. सबैलाई स्मरणको प्रयास, ६. प्रेमको अभिव्यक्ति र ७. ज्ञान र विनम्रताको प्रदर्शन । आजको शृङ्खलामा नमस्कार गर्नुपछाडिको रहस्यका थप आठ आयामबारे चिन्तन गरिँदै छ । आउनुस्, ती आठ बुँदाबारे चर्चा गरौँ ।
१. कर्मवीर हुने प्रतिबद्धता
हात बाँधेर बस्ने, हात गोजीमा राखेर बस्ने वा हात पछाडि राखेर बस्ने व्यक्तिलाई कहिल्यै पनि सफलताले पछ्याउँदैन । जसको हात अगाडि आउँछ, काम गर्न तत्पर हुन्छ उही सफल हुन्छ । नमस्कारमा प्रयोग हुने दुई हातले कर्मशीलताको पनि सङ्केत गर्दछन् । हामीले कमाइ गर्ने हात नै हुन्, श्रम र मिहिनेत गर्ने हात नै हुन् । नमस्कार गर्ने व्यक्तिले कर्मशीलता सिकेको हुन्छ । उसलाई कसैको केही कुरा पनि सित्तै चाहिँदैन, बरू दिन पाए हुन्थ्यो भन्ने हुन्छ । त्यसो त, हामीले कसैलाई दिन्नँ भनेर भने पनि मरेर जाँदा यहीँ धरतीलाई नै दिएर वा छोडेर नै जान्छौँ । नमस्कार गर्ने मान्छे सधैँ महान् हुन्छ, किनकि ऊ दाता हो । सबैभन्दा पहिले त उसले आफ्नो सम्मान र श्रद्धा दान गरेर दिने कामको सुरूआत गरेको हुन्छ । तसर्थ, ‘म सम्मान गर्छु, म कमाउँछु, श्रम गर्दछु, मागेर र चोरेर खान्नँ । पौरख गर्छु र सबैका लागि सहयोग गर्दछु’ भन्नु पनि नमस्तेको अर्को अर्थ हो ।
२. पञ्चत¤वको सन्तुलन
हाम्रो शरीर पृथ्वी, जल, तेज, वायु र आकाश गरी पाँच त¤व मिलेर बनेको हुन्छ । बाहिरको संसार पनि यिनै पाँच त¤वले बनेको हुन्छ । हाम्रो शरीर यही बाहिरी संसारको सानो झलक हो । मासु र हाड पृथ्वी, रगत, पसिना र अन्य तरल जल, शरीरको ताप र आँखाको ज्योति तेज, शरीरभित्रको हावा, विभिन्न वायुहरु वायु र शरीरका विभिन्न छिद्र र प्वालहरु अकाश हुन् । जब यी पाँच त¤वबीच असन्तुलन पैदा हुन्छ, न त बाहिरको संसार स्वस्थ हुन्छ, न त हाम्रो शरीर नै स्वस्थ हुन्छ । नमस्कार गर्दा शरीरका सबै औँलाहरुमा छोइन्छन्, जोडिन्छन् अथवा तिनको बीचमा स्पर्श हुन्छ, जसले गर्दा यी पाँचै त¤व सुव्यवस्थित र सन्तुलित हुन पाउँछन् । बुढी (अङ्गुष्ठा) औँलाले अग्नि, चोर (तर्जनी)ले वायु, माझी (मध्यमा)ले आकाश, साहिँली (अनामिका)ले पृथ्वी र कान्छी (कनिष्ठा) औँलाले जल त¤वलाई प्रतिनिधित्व गर्दछन् । दुवै हातका औँलाका टुप्पामा बारम्बार स्पर्श हुँदा तिनमा गति पैदा हुन्छ र त्यही गतिका कारण शरीरका पञ्चत¤वमा सन्तुलन पैदा हुन जान्छ । यही सन्तुलनका कारण व्यक्ति शारीरिक र मानसिक शान्ति र समृद्धिको दिशामा क्रमशः अघि बढ्दै जान्छ । त्यस्तै गुलियो, अमिलो, नुलिलो, तीतो, टर्रो र तिखो स्वादलाई पनि यी औँलाहरुले प्रतिनिधित्व गरेका हुन्छन् । नमस्कार मुद्राले सबै स्वादबीचको सन्तुलनलाई पनि कायम राख्न सघाउँछ । त्यतिमात्रै होइन, पाँच औँलामा पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण र केन्द्र गरी पाँच दिशाको निवास रहेको हुन्छ । नमस्तेको बारम्बारको अभ्यासले हाम्रालागि सबै दिशाहरु मङ्गल हुँदै जान्छन् ।
३. अनासक्तिको अभ्यास
यसअघि नै चर्चा भएजस्तै जुटेपछि छुट्नुपर्दा गाह्रो हुन्छ, जोडिएपछि छोडिन गाह्रो हुन्छ । नमस्कार गर्दा केवल हाम्रा दुई हातमात्रै जोडिएका हुन्छन्, तर हामी कसैसित पनि शारीरिकरुपले जोडिएका भने हुँदैनौँ । हामी जोडिएका त हुन्छौँ, तर हार्दिकरुपले । हामी यसरी जोडिएका हुन्छौँ, जुन कहिल्यै छुट्नै पर्दैन । आसक्तिका कारण पीडा हुने भनेको छुट्टिनुपर्दा हो । गुमाउनुपर्दा हो । नमस्कारले केही गुमाउनुपर्दैन । दुई आत्मा चाहे जति नै धेरै दूरीमा किन नहोऊन्, तर उनीहरुका बीचमा कुनै दूरी हुँदैन । फरक फरक शरीरमा आत्माको बास हुने भए पनि आत्मा–आत्माका बीचमा संवाद हुन सक्छ, भाव सञ्चार हुन सक्छ । नमस्कारको बारम्बारको अभ्यासबाट हामी अनासक्तिको बाटोमा अघि बढिरहेका हुन्छौँ । दुःख र वियोग त शरीरको धर्म हो, मूर्तको माया हो । आत्माको धर्म र आनन्द त प्रेम हो । नमस्कारले आत्माको दर्शन र स्पर्श गर्ने हुँदा त्यसको वियोग कहिल्यै खेप्नुपर्दैन, किनकि ऊ शरीररुपी मूर्तिसित आसक्त भएको हुँदैन । त्यसैले, नमस्कार गर्नु भनेको सम्बन्धमा सन्तुलनको अभ्यास गर्नु पनि हो । ‘कसैसित धेरै नजिक हुने पनि होइन, टाढा हुने पनि होइन । तिमी ठीक्कको दूरीमा बस । यस्तो सम्बन्ध बनाऊ, जुन हुँदा पनि उत्तम नै हुन्छ, नहुँदा पनि खुसी र आनन्द गुम्दैन’, हामीलाई नमस्कार सिकाएर गएका विशिष्ट मनीषीहरुले सायद यही भन्न खोजेका हुनुपर्दछ ।
४. कर्म र ज्ञानको एकता
हाम्रो शरीरका दुई हातमध्ये देब्रे हातका पाँच औँलाहरुले पाँच कर्मेन्द्रिय, जस्तैः गुदा, लिङ्ग÷योनी, मुख, खुट्टा र हातले पाँच कर्मेन्द्रियलाई प्रतिनिधित्व गरेका हुन्छन् भने दाहिने हातका पाँच औँलाहरुले पाँच ज्ञानेन्द्रियहरु, क्रमशः आँखा, जिब्रो, नाक, छाला र कानको प्रतिनिधित्व गरेका हुन्छन् । नमस्कार गर्दा यी दुवै इन्द्रिय एकीकृत हुन पाउँछन्, सन्तुलित हुन पाउँछन् र गतिशील समेत हुन पाउँछन् । कमे्रन्द्र्रियहरु स्वस्थ भए भने हाम्रा सबै कर्महरु पनि स्वस्थ, सक्रिय र सन्तुलित हुन पाउँछन् । ज्ञानेन्द्रियहरु स्वस्थ भए भने पनि बोधको यात्रा सहज हुन्छ । गीतामा पनि कृष्णले कर्म र ज्ञानको सन्तुलनमा जोड दिनुभएको कुरा स्मरणीय छ । दुई हात जोडेर बारम्बारको नमस्कार गर्दा हामीले आफूलाई ज्ञान र कर्मलाई सँगसँगै लिएर जाने संस्कार पाउँछौँ, सरस्वती र लक्ष्मीलाई साथसाथै लिएर अघि बढ्ने मौका पाउँछौँ । नमस्कारले हामीमा ‘कर्म र ज्ञानबीचको एकतामा जोड देऊ’ भनेर ऊर्जा भर्ने काम गर्दछ ।
५. इष्टमित्र कमाउने काम
यदि इष्टमित्र कमाउनुछ, मानिसहरुको स्नेह र प्रेम प्राप्त गर्नुछ वा सबैका लागि स्मरणीय बन्नुछ भने नमस्कार गर्नुस् । हामीसित वर्षमा तीन सय पैँसठ्ठी दिन हुन्छन् । दिनको एक जना नयाँ मान्छेलाई हाँसेर, प्रसन्न भएर अत्यन्त श्रद्धासाथ नमस्कार गर्दै जाने हो भने वर्षभरिमा कम्तीमा तीन सय पैँसठ्ठी जना मानिस हाम्रा इष्ट बन्न पुग्दा रहेछन् । यो सङ्ख्या बढ्दै जाँदा जीवनभरि हामीले आर्जन गर्ने मानिसको सङ्ख्या लाखौँको हुन्छ । हामीलाई सहयोग गर्न लाखका लाख नै मान्छे पनि चाहिँदैन । तीमध्ये केहीले मात्रै सानो सहयोग गरे भने पनि हामीलाई सहयोग मिल्छ । अभिमानीसित कोही पनि नजिकिन चाहँदैन । जो विनयी छ, नम्र छ र अरुलाई मूल्य दिन्छ उही समाजमा मूल्यवान् भएर जान्छ । आज व्यक्ति बाँचेको त छ, तर एक्लो । किन ? किनकि उसका कोही छैनन् । किन ? किनकि उसले कोही कसैलाई आफ्नो बनाउन चाहेन ? कसरी ? किनकि उसले कसैलाई पनि सम्मान, आदर र श्रद्धा व्यक्त गर्न चाहेन । आफूलाई सम्मान गर्ने व्यक्तिलाई नै अरुले पनि सम्मान गर्ने हुन् । तसर्थ, नमस्कारले हामीलाई सधैँ इष्टमित्रहरुकै बीचमा रहने सौभाग्य दिन्छ ।
६. अहम्बाट सोहम्तिरको आस्था
‘अहम्’ भनेको म हो भने ‘सोऽहम्’ भनेको ‘म भनेको त त्यो ईश्वर हो’ भन्नु हो । अर्थात् ‘मभित्र ईश्वरीय धङधङी छ, म उसको अंश हो । म केही होइन । एक परमात्मा परमेश्वर नै मेरा अस्तित्व हुनुहुन्छ, त्यसैले त्यस्ता दिव्य परमात्मालाई म नमस्कार गर्छु’ भन्नु पनि नमस्कारको अर्को अर्थ हो । अहम्ले व्यक्ति सीमित हुन्छ । नमस्कारले हामीभित्रको अहम्लाई सोऽहम्मा लगेर एकीकृत गरिदिन्छ, त्यसपछि नै हामी सबैका प्रिय हुने हौँ, सबैका साथी हुने हौँ । परम्ब्रह्म परमात्मा सम्पूर्ण आस्था विसर्जन गर्नुको द्योतक पनि नमस्कारलाई मानिन्छ ।
आखिर मानिस प्रिय हुने भनेकै अहम् घटाएपछि हो । अहम् भएको व्यक्ति वा आफूलाई नै सर्वस्व ठान्ने मानिस प्रायः एक्लो हुन्छ । नमस्ते गरिरहँदा हामीले आफूभित्रको अहम्लाई कमजोर बनाउने काम गरिरहेका हुन्छौँ । यसको अर्थ हामी मूल्यहीन हुन्छौँ, सकिन्छौँ वा साँच्चै नै कमजोर हुन्छौँ भनेको होइन । हाम्रो अस्तित्व त झन् बलियो भएर जान्छ, किनकि हामीले नमस्ते गरिसकेपछि जुन प्रतिक्रिया प्राप्त गर्दछौँ त्यसले हामीलाई पछिपछिसम्म पनि प्रसन्न तुल्याउँछ ।
‘स’ भनेको ‘त्यो’ हो । सोहम्को अर्थ हुन्छ, म भनेकै ‘त्यो’ हो, अर्थात् परब्रह्मा परमात्मा हुँ । ‘जुन व्यक्तिलाई मैले नमस्कार गरिरहेको छु, उसभित्र त्यही परमात्मा छ । म त्यस व्यक्तिभित्रको परमात्मासित एकीकृत हुन पाऊँ’ भन्नु नमस्कार गर्नुको रहस्य हो ।
७. भगवान्देखि भगवान्सम्मको यात्रा
हामीभित्र पनि परम प्रभुको बास छ, अर्थात् हामी उही ब्रह्माण्डीय ऊर्जारुपी परम सत्ताका झलक हौँ । त्यस्तै, हामीमा जस्तै हाम्रो आँखाअगाडिको व्यक्तिभित्र पनि त्यही ऊर्जा विद्यमान छ । ‘म र ऊ भौतिक रुप र आकृतिमा फरक र भिन्न छौँ, तर भित्रको अस्तित्व भने उस्तै छ । मभित्रको ढु्कढुकीको स्रोत र उसभित्रको ढुकढुकीको स्रोत भिन्न हुँदै होइन । त्यसैले, नमस्ते गरेर मैले मभित्रको ईश्वरलाई मेरो आँखाअगाडि रहेको व्यक्तिभित्रको ईश्वरसित एकीकृत गर्दै छु, जोड्दै छु वा लीन तुल्याउँदै छु’— यो नमस्तेको अर्को महारहस्य हो ।
त्यसैले, नमस्कार गर्दा शरीरका कुनै पनि अङ्गप्रत्यङ्ग दोस्रो व्यक्तिसित जोडिएको हुँदैन, तर भावना भने सम्पूर्णरुपमा पोखिएको हुन्छ, विचार पूरै भगवद्मय बनेको हुन्छ, परस्परमा एकीकृत भएको हुन्छ । तसर्थ, नमस्कार एउटा शरीरभित्रका भगवान्देखि अर्को शरीरभित्र मुस्कुराइरहेका भगवान्सम्मको यात्रा हो । यसो गर्दा हाम्रो भावना, विचार वा चिन्तनमा रत्तिभर नकारात्मकता, दुःख र दुराशय जन्मँदैन ।
८. सबै समान र योग्य, सबै बराबर
नमस्कारले हामीलाई सिकाएको अर्को विशिष्ट कुरा भनेको समता हो, विभेदबाट मुक्ति हो । नमस्कारले सबैभित्र ब्रह्माण्डकै सर्वोच्च सत्ताको निवास छ भनेर स्वीकार गरिसकेपछि के कोही गरिब हुन सक्छ ? के कोही कमजोर र अछूत हुन सक्छ ? के कोही दलित वा अपहेलित हुन सक्छ ? कदाचित् सक्दैन । यदि सबैलाई उत्तिकै मह¤व दिनुछ भने सबैको योग्यता र क्षमता एउटै हो, बराबर हो भनेर मान्ने हो भने नमस्कारको बारम्बार अभ्यास गर्नुको कुनै विकल्प छैन ।
अरुभन्दा आफूलाई विशेष देख्ने, माथि देख्ने वा सर्वोच्च देख्ने मान्छेले मात्रै अरुलाई नमस्ते गर्दैन । आफूलाई सर्वोच्च देख्ने कुरा नराम्रो पनि होइन, देख्नुपर्ने नै विशिष्ट हो, सर्वोच्च हो, किनकि हामीभित्र उनै सर्वोच्चको निवास छ, तर आफूलाई मात्रै सर्वोच्च देख्नु र आफूजस्तै अर्कोलाई निकृष्ट देख्नु विभेद हो, अपराध हो, सर्वोच्च सत्ताको अपमान हो । नमस्तेले यी सबैसबै प्रकारका विभेद, अपमान र परस्परको अश्रद्धालाई चकनाचुर पारिदिन्छ र हामी सबैलाई उदात्त र सर्वोच्च संस्कारका हिमायती बन्न सतत उत्प्रेरित गरिरहन्छ ।
समग्रमा नमस्कार हाम्रो गौरवपूर्ण संस्कार हो, हाम्रो सम्पत्ति हो, हाम्रो वैभव हो । हामीले जहिलेसम्म नमस्कार गर्छौं तहिलेसम्म हाम्रा मूल्य, दर्शन, पहिचान, संस्कार, इज्जत, प्रतिष्ठा र प्रेम कायम रहन्छन्, अन्यथा सबै माटोमा मिसिएर विलीन हुन पुग्दछन् ।
शिष्यले गुरूलाई, छोराले बाबुलाई, छोरीले आमालाई, भाइले दाइलाई, बहिनीले दिदीलाई, सानोले ठूलोलाई, एउटाले अर्कोलाई । अर्थात्, चाहे जसले जसलाई नमस्कार गरिरहेको होओस्, उसले ‘मजस्तै तपाईं हुनुहुन्छ अथवा मभन्दा पनि विशिष्ट हुनुहुन्छ । तपाईंभित्रको ईश्वर र मभित्रको ईश्वर अलग होइनन्, तपाईंभित्रको अस्तित्व र मेरो अस्तित्व दुवै एउटै हुन् । हामी एकीकृत छौँ । एउटाको अभावमा अर्कोको कुनै पनि अस्तित्व रहँदैन । त्यसैले आउनुस्, हामी एक हुँदै परस्परको अस्तित्व स्वीकार गरौँ । त्यसको सुरूआत म गर्छु । त्यसमा तपाईं पनि सहभागी बन्नुहोस्’ भनेर भनेको हुन्छ, भनेको हुनुपर्दछ । समाजमा बाँच्नुको अर्थ पनि यही हो । नमस्कारले हामीलाई एकैसाथ धेरै कुराहरु दिएको छ । आउँदा दिनमा नमस्कारका अन्य आयामहरुका बारेमा थप चर्चा गरौँला । यतिबेला यत्ति जानौँ— ‘नमस्कार, हाम्रो सर्वस्व हो । यो मनुष्य सभ्यताकै विशिष्ट दर्शन हो, सभ्यता हो र सर्वोत्कृष्ट संस्कार हो ।’
गण्डकी प्रदेशका पाँच जिल्लामा १८ संक्रमित थपिए